नुहाएपछि किन चाउरिन्छ छाला ?
नुहाएपछि किन चाउरिन्छ छाला ?
​चिसो मौसममा होस् या गर्मी मौसममा हामीले दैनिक गर्ने हरेक क्रियाकलापअनुसार मानव शरीरमा विभिन्न खाले प्रभाव परिरहेको हुन्छ । हाम्रो शरीरमा पानीसँगको सँसर्गमा पनि शरीमा असर देखिने गर्छ । लामो समय पानीमा खेल्दा होस्, नुहाउँदा होस् वा लुगा धोएपछि हाम्रो शरिरको केही हिस्साको छाला खुम्चिने गर्छ । हात, हत्केला, औलाको छाला, गोडाको छाला धेरै बेर पानीमा रहँदा खुम्चेर चाउरिए जस्तो देखिन्छ ।
छालाको जुन हिस्सा चाउरी पर्छ त्यो स्नायू प्रणाली ठिक भएको ठहरिन्छ । त्यहाँको केही नसा काटिदिने हो भने त्यसरी चाउरी नपर्ने वैज्ञानिकहरुको दाबी छ ।